Iindaba -I-Shandong Limeng ibibanjelwe kumsitho wesebe elitsha lomzi-mveliso
Ngo-Matshi 6, 2019, Shandong Limeng ibibanjelwe kumsitho wesebe elitsha lomzi-mveliso. Abalingani beLimeng nabo bathathe inxaxheba kulo msitho.
Ukuze wandise imveliso yenkampani kwaye ityebise ngakumbi iiprojekthi, iLimeng Pharm ityale i-1.2 yezigidi yeepawundi ukuthenga umhlaba weehektare ezili-10. Isebe elitsha lomzi-mveliso liya kwakhiwa iindibano zocweyo zeemitha zesikwere ezingama-4000. Kwaye iya kugqitywa kwiinyanga ezili-10.
Okwangoku, inkampani yaseLimeng inayo amayeza emveli amaTshayina, ukuhanjiswa kokutya, umasifundisane wemveliso yezithambiso, umasifundisane wezixhobo zonyango, umasifundisane wobisi kunye nomzi mveliso wokukhupha amayeza amaTshayina, kwaye bonke bepasile isatifikethi sikamasifundisane sokucoca. Iimveliso zethu zithunyelwa Australia, i-USA, Puerto Rico kunye namanye amazwe kunye neendawo. Kwakuquka izicatshulwa zezityalo, iilekese gummy, iimaski zobuso kunye nesibulali zintsholongwane ngaphandle kwezandla njalo njalo.
Emva kokuba isebe elitsha lomzi-mveliso liya kuvulwa, iiprojekthi zeelekese gummy ziya kwandiswa ziye kwimigca emine yokuvelisa kumasifundisane wokutya. Kwindawo yokusebenzela yezixhobo zonyango, ezi ndawo ziya kwandiswa ziye kwi-5000 yeemitha zesikwere kwaye zonyuswe ziye kwimigca yokuvelisa eyi-10 yokuvelisa iimaski zobuso bezonyango kunye neemaski zobuso zotyando. Imveliso yemihla ngemihla iya kuba kwizigidi ezi-2. Intsholongwane enokulahlwa kwesampulu ityhubhu ikwaveliswa kumasifundisane wethu.
I-Limeng Pharm's ikwasebenzisana ne-SGS, i-Bsi Uk kunye nezinye iiarhente zovavanyo zomntu odumileyo zamazwe aphesheya ukuqinisekisa inkqubo yolawulo lwequlity, isatifikethi seEC njalo njalo ukuqinisekisa umgangatho weemveliso zaphesheya.
Inkampani ixhasa uluvo lolawulo lweshishini "Ukusinda kumgangatho, Ukuphuhlisa ngeKhredithi, ejolise kubuchwephesha, Inzuzo kuLawulo". Imisela ngokungqongqo imithetho efanelekileyo kunye nemimiselo yezomthetho yokwenza imveliso kunye nolawulo, yazisa indlela yolawulo oluphambili yokuhlanganisa ngokufanelekileyo itekhnoloji, imveliso, ukuthengisa kwishishini, kwaye ifezekisa iziphumo ezibalulekileyo, ezibeka isiseko esiqinileyo seshishini ukuphuhlisa ukuya kwelinye inqanaba elitsha kwaye wenze inkulungwane eqaqambileyo.